Messi Archives - नेपाल आज
मेसीले कारपार्किङमा बिल तिर्न बिर्सिएपछि…
स्पेनीस ला लीगाको विन्टर ब्रके समाप्त भएको छ । लिगमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल बिदा सकाउंदै आ–आफ्ना क्लबमा खेलाडि फर्किरहेका छन् । बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लियोन मेसी पनि यसै साता नाउ क्याम्पको प्रशिक्षणमा आबद्ध भए । बार्सिलोनाको घरेलु मैदान नाउ क्याम्पमा प्रशिक्षणका क्रममा ठुलो समस्या झेल्नु पर्यो । विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएका मेसीले ठुलो चार्ज तिरेपछि मात्र जान […]
मेसीले कतारमा भेटे अफगान बालकलाई
Posted on: December 14, 2016December 14, 2016Posted by: Tirtha Khanal
मंसिर २९ । बार्सिलोनाका स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीको प्लाष्टिकले बनेको जर्सी लगाएर अनलाईनमा चर्चामा आएका अफगानिस्तानका एक बालकले मेस्सीलाई भेट्ने मौका पाएका छन् । गत जनवरीमा मेस्सी तथा नम्बर लेखिएको प्लाष्टिकको जर्सी लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएपनि अफगानिस्तानका बालक मुर्तजा अहमदी चर्चामा आएका थिए । अहमदीलाई अहिले आएर मेस्सीले भेटेका छन् । जनवरीमा सामाजिक सञ्जालमा […]
च्याम्पियन्स लिगमा को अगाडि : मेस्सी वा रोनाल्डो ?
Posted on: November 25, 2016Posted by: Bishow Rimal
मंसिर–१० । बार्सिलोनाका स्टार स्ट्राइकर लिओनल मेस्सी र रियल मड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोबीच च्याम्पियन्स लिगमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यी दुई बीच च्याम्पियन्स लिगमा १०० गोल पूरा गर्न प्रतिस्पर्धा चलेको हो । च्याम्पियन्स लिगमा सर्वा्धिक गोल गर्ने सूचीमा रियल म्याड्रिडका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नाम अगाडि छ । रोनाल्डोले १ सय ३६ खेलमा ९६ […]
महङ्गो खेलाडीमा मेस्सी–रोनाल्डोबीच टक्कर
कात्तिक–१७ । स्पेनिस क्लबका खेलाडीहरु विश्वका बढी कमाई गर्ने फुटबलरको शीर्ष तीन स्थानमा पर्न सफल भएका छन् । बढी कमाई गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सी र रियल मड्रिडका क्रिष्टियानो रोनाल्डोबीच टक्कर छ । हप्ताको मात्र हिसाब गर्दा मेस्सी र रोनाल्डोले ३ लाख ६५ हजार पाउण्ड स्ट्रलिङ कमाउँछन् । दुवै खेलाडीले कर कटाएर वर्षको […]
रोनाल्डो मेस्सीको प्रशंसक बनेपछि…
Posted on: October 28, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक–१२ । एक स्टार फुटबल खेलाडीले प्रशंसा गर्ने फुटबल खेलाडी को हुन सक्ला ? बितिसकेका महान खेलाडी, आफ्नै जाडीको रुपमा खेल्ने खेलाडी वा आफूलाई बल उपलब्ध गराउने मिडफिल्डर ? तर आफ्नो प्रतिद्धन्द्धी भने नहोला । पक्कै पनि हामीले रियल मड्रिडका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सबैभन्दा बढि प्रशंसा गर्ने खेलाडी उनकै जोडीको रुपमा खेल्ने वा बितिसकेका महान् […]
नेइमार बार्सिलोनामा आउनुको रहस्य यस्तो छ
कात्तिक–१२ । बार्सिलोनामा सन् २०१३ मा क्याम्प नोउमा स्थानान्तरण भएपछि नेइमारले धारिलो सहयोगीको रुपमा मेस्सीसँग भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यही सहयोगका कारण बार्साले सन् २०१४–१५ को बीचमा दुई ला लिगा र च्याम्पियन्स ट्रफीको उपाधि जितिसकेको छ । तर ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेइमार स्पेनिस च्याम्पियन क्लब बार्सिलोनाबाट खेल्नुको रहस्य के हो ? नेइमारका पिताले भने […]
रोनाल्डो र मेस्सीबिच शतक गोल पुर्याउने टक्कर, बाजी कसले मार्ला
कात्तिक–४ । च्याम्पियन्स लिगको जारी सिजनमा समूह चरणको खेलहरु भइरहेका छन् । खेलहरु निकै रोमाञ्चक र उत्कृष्ट भएसँगै धरैको नजर रियल मड्रिडका क्रिष्टियानो रोनाल्डो र बार्सिलोनाका लियोनल मेस्सीमा छ । रोनाल्डो र मेस्सी च्याम्पियन्स लिगमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने शीर्ष दुई खेलाडी हुन् । जसले गोलमा शतक पूरा गर्न नजिकिँदै छन् । रोनाल्डोले अहिलेसम्म ९५ […]
मेस्सिको हृयाट्रिकमा बार्सिलोनाको शानदार जीत
Posted on: October 20, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक ४ । लिओनल मेस्सीको हृयाट्रिकको मदतमा बार्सिलोनाले च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा पेप ग्वार्डिओलाको म्यानचेष्टर सिटीमथि शानदार जित हात पारेको छ । सिटीको प्रशिक्षक बनेपछि बार्सिलोनाका पूर्व प्रशिक्षक ग्वार्डिओला पहिलो पटक नाउ क्याम्प पुगेका थिए । तर, ४–० लज्जास्पद हार व्यहारेको छ ।पहिलो हाफमा सिटी प्रतिस्पर्धी नै देखिएको थियो । तर, मेस्सी चोटमुक्त भएर फर्किएपछि आक्रामक […]
खानाका पारखी मेसी फिल्म हेदैनन्
Posted on: September 28, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज १२ ।कोपा अमेरिकामा आफ्नो टिम अर्जेन्टिनालाई फाइनलमा जिताउन असफल भएपछि फुटबल स्टार लियोनल मेसीले तत्कालै सन्यासको घोषणा गरे । तर, उनको यो घोषणा लामो समयसम्म टिकेन । अर्जे्न्टिनाका राष्ट्रपतिदेखि प्रशंसकको आवाज सुन्दै उनले अहिले सन्यासको घोषणा फिर्ता लिइसकेका छन् । यसलाई मेसीको अस्थिरता पनि भन्ने गरिएको छ । तर, मेसी खानपिनको च्वाइसमा भने बाल्यकालदेखि […]
मेसी र रोनाल्डोबाहेक को को परे यस वर्षको उत्कृष्ट १० खेलाडीमा
Posted on: July 19, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
साउन ४ । युरोपियन फुटबलको निकाय युइएफएले यस वर्षको सिजनको प्रदर्शनको आधारमा युरोकपको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डका लागि अन्तिम १० मा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । । सुरुवाति मनोनयनमा परेका ३७ जना खेलाडीबाट युइएफएका ५५ सदस्य एसोसिएसनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५५ पत्रकारको मतको आधारमा उत्कृष्ट १० खेलाडीको नाम छनौट गरिएको हो । उत्कृष्ट १० […]
मेसीले बार्सिलोना छाड्ने आशंका
Posted on: July 10, 2016Posted by: मिलन गुरागाईं
बार्सिलोना स्पेनिस फुटबल लिग ला लिगाका अध्यक्ष जाभिएर टावेसले लियोनल मेसीले स्पेन छाड्ने शंका ब्यक्त गरेका छन । मेसीले कर छली प्रकरणमा जेल सजाय पाएपछि स्पेनिस लिग छाड्ने डर भएको बताएका छन् । यता स्पेनिस संचार माध्यमहरुले मेसीका पिता जर्जले इङलिस प्रिमियर टोली चेल्सीका मालिकलाई भेटेको समाचार बाहिर ल्याएपछि यो सम्भावना अझ चुलिएको देखिन्छ । […]
मेसीको सन्यासले रोनाल्डो निराश
Posted on: July 3, 2016July 3, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
ब्राजिलीयन फुटबल लिजेन्ड रोनाल्डोले अर्जे्न्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट बिदा लिने निर्णयले आफूलाई निराश बनाएको बताएका छन् । चिनीया संमाचार एजेन्सी सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै उनले मेसीले संन्यास लिनु नितान्त व्यक्तिगत विचार भएको र उनको यो निर्णयको सवैले सम्मान गर्नु पर्ने बताए । उनले मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल जीवन टुङयाउँदा आफू दुखी भएको र मेसीले आफ्नो निर्णयमा […]
तनाबमा मेसी, मेसीको विकल्प खोज्न म्याराडोनाको आग्रह
अर्जेन्टिनाका महान् फुटबलर डिएगो म्याराडोनाले आफ्नो बोली परिवर्तन गरेका छन । उनले राष्ट्रिय टोलीबाट भर्खरै सन्यास लिएका कप्तान लियोनल मेसीलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब नदिन सबैसँग अग्रह गरेका छन् । तर उस अघी उनले नै मेसीलाई टोलीमा फर्कन आग्रह गरेका थिए । उनले सन्यासको निर्णय जारी राख्ने वा त्यसमा पुनर्विचार गर्नेबारे सोच्न मेसीलाई केही समय […]
मेसीलाई राष्ट्रपतिको फोन तिमी सन्यास फिर्ता लेऊ
अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति माउरिसियो म्याक्रीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका लियोनल मेसीलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्कन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रपति माउरिसियोले आफैले मेसीलाई फोन गरेर सन्यासको निर्णयबाट पछि हटेर टोलीमा फर्कन आग्रह गरेका हुन् । सोमबार अमेरिकाको न्यूजर्सीमा भएको कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि भिडन्तमा चिलीसँगको पेनाल्टी सुटआउटमा गोल गर्न चुकेका मेसीले अर्जेन्टिनाले हार ब्यहोरेपछि अर्जेन्टिनी टेलिभिजनसँगको […]
…….. अनि लिए मेसीले सन्यास – भिडियो सहित
Posted on: June 27, 2016August 6, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी सुपर स्टार खेलाडी हुन् । उनकै नेतृत्वमा अर्जेन्टिनाले धेरै खेलमा फाईनलमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका महान हस्ती मेसीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषण गरेका छन । जारी कोपा अमेरिकाको फाईनलमा चिली संग पराजीत भएसंगै मेसीले सन्यासको घोषणा गरेका हुन । अकस्मात उनले दिएको सन्यासले फुटबल जगतमा बहस सिर्जना गरेको छ । […]
मेस्सीले लिए अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट सन्यास, समर्थकहरु स्तब्ध
Posted on: June 27, 2016June 27, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
असार १३ । अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोन मेस्सी अब राष्ट्रिय टिमबाट बिदा भएका छन् । कोपा अमेरिका कपमा चीलीसंग पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित भएसंगै उनले अर्जेन्टिनाबाट नखेल्ने घोषणा गरेका हुन् । अन्र्तराष्ट्रिय खेलकुदमा सबैभन्दा खराब प्रर्दशन गरेका मेस्सीले फाइनलमा चीलीसंग पेनाल्टी मिस गर्दा उनका समर्थकलाई स्तब्ध बनाएका थिए । २९ वर्षे खेलाडी मेस्सी सन् २००५ मा […]
लियोनेल एन्ड्रेस मेस्सीको जन्म २४ जुन, १९८७ मा अर्जेन्टिनामा भएको हो । मेस्सी आफ्नो पुस्ताका सर्वश्रेष्ठ फुटबल खेलाडीहरू मध्ये एक मानिन्छन्न मेस्सीले २१ वर्षको उमेरमा नै बेलोन डी’ ओर र फिफा सर्वश्रेष्ठ वर्षको खेलाडीको उपाधि प्राप्त गरे । उनको खेल शैली र क्षमताको कारणले गर्दा अनलाई फुटबलको बादशाह भनेर चिनिन्छ । मेस्सी, २००५ फिफा विश्व […]
अमेरिकी समर्थकलार्इ मेसीको डर
Posted on: June 21, 2016June 21, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
मैदानमा खेलिरहँदा होस् या बेन्चमा बस्दा मेसी सधैं समर्थकको आकर्षणको केन्द्र हुने गर्दछन् । अमेरिकामा जारी कोपा अमेरिकामा हजारौं अमेरिकन समर्थकले अर्र्जेिन्टनाका स्ट्राइकर लियोनेल मेसीको प्रर्दशनमा ताली पिट्दै उनलाई हौस्याउँदै आएका छन् । तर, तिनै हजारौं समर्थकलाई सेमिफाईनलमा आफ्नै घरेलु मैदानमा अर्र्र्र्र्जेिन्टना संग खेल्दा मेसीकै डर हुनेछ । मेसी अहिले पूर्ण रुपमा फिट छन् । […]